Jaangooynta Lacagta ah 7 Qaabka ugu Fiican ee Qalabka Kaydka
Isticmaalka Isticmaalka Macluumaadka Kaydinta, waxaad ka soo saari kartaa macluumaadka bogagga xulashadaada ee ka yar wax ka yar kan
5 daqiiqo. Shaki kuma jiro, waa mid ka mid ah kuwa ugu faa'iido leh oo ugu faa'iido leh shabakadda webka qalabka internetka. Macluumaadka Kaydinta Isticmaalka wuxuu leeyahay awood wax ku ool ah oo adeegsanaya iyo xogta xoqida boggaga Ajax, goobaha password-ka difaaca, goobaha sahlan iyo firfircoon, XML, JSON iyo ilo kale oo la mid ah. Qaar ka mid ah sifooyinka cajiibka ah ee hoos ku xusan.
1. Raadin fudud oo la raadinayo:
Sida jumladaha kale ee caanka ah, Macmiilka Data Scraping wuxuu bixiyaa hab wanaagsan oo lagu baadho ereyada muhiimka ah. Waa inaad soo dejiso oo aad dhaqaajiso qalabkan oo aad isticmaasho si aad u habayso xogtaada iyadoo ku saleysan ereyada muhiimka ah. Waxay keenaysaa ereyo badan oo ereyada iyo odhaahyo si aad uga hesho waxyi. Sidaa daraadeed, ma aha oo keliya xoqida macluumaadkaaga laakiin sidoo kale waxay kuu diyaarineysaa iyadoo lagu saleynayo ereyada gaaban iyo ereyada dheeraadka ah.
2. Daraasadda suuqyada:
Macluumaadka Kaydinta Isticmaalka waa mashiinka kaliya ee sameeya raadinta suuq-geynta wanaagsan ee dadka isticmaala. Si ka duwan noocyada kale ee caadiga ah waraaqaha , qalabkani wuxuu bixiyaa natiijooyin tayo leh oo ku salaysan raadintaada. Sidaa daraadeed, waa mid ku habboon suuqa, cilmi baarayaasha internetka, ardayda, saxafiyiinta iyo culimada.
3. Isdhexgalka xogta Webka:
Sababta ugu fiican ee loo adeegsado Istaraatiijiyada Macluumaadka (Studio Scraping Studio) waa in ay bixiso fursado wax ku ool ah u-dhexgalka xogta webka. Waxay ku habboon tahay dhammaan daalacashada websaydhka iyo nidaamyada hawlgalka, taasoo kuu sahleysa inaad ku xoqdo xogtaada oo aad ku dhejiso sida aad rabto.
4. Isbarbardhiga xogta
Xitaa waraaqaha xogta ugu sarreeya xitaa ma barbar dhigi karaan xogta laba ama in ka badan boggaga internetka. Nasiib wanaag, Xogta Kaydinta Isticmaalku waxay leedahay doorashadan waxayna kuu ogolaaneysaa inaad falanqayso xogta boggaga internetka oo hubinaya in aad hesho natiijooyin tayo leh oo lagu kalsoonaan karo. Intaa waxaa dheer, qalabkani wuxuu wax ka beddelayaa xogta xoogaa, ka saarida dhammaan hingaadka iyo qaladaadka naxwe ahaaneed ee ka soo baxaada.
5. Kormeerka tayada:
Barnaamijkani wuxuu kormeerayaa tayada xogtaada marka la xoqayo soo saaridda. Waxaa loola jeedaa inaadan u baahnayn inaad isha ku hayso fiirogalka maxaa yeelay qalabkani wuxuu si toos ah kuu heli doonaa macluumaadka la akhrin karo oo la qaadi karo ee qaabka aad ugu jeceshahay.
6. Faahfaahinta / Faahfaahinta alaabta la bixiyay:
Isticmaalayaasha barnaamijkan ayaa si fudud u helaya faahfaahinta faallada iyo sheyga. Waxay micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso Isticmaalka Isticmaalka Macluumaadka ee shabakadda e-commerce, waxaad ka heli kartaa macluumaad ka yimid kooxda sida Amazon iyo eBay iyaga oo aan wax u dhimeynin tayada. Waxaad isku dayi kartaa qalabkan si aad u hesho faahfaahinta alaabta, liiska magacyadooda, sharraxaadkooda iyo xitaa sawirada. Sidaa daraadeed, waxaan dhihi karnaa Data Scraping Studio waa hab kale oo aad u fiican Amazon Scraper iyo Facebook Extractor.
Isticmaalayaasha kala duwan waxay ka cabanayaan maqnaanshaha digniinta shaqada. Si ka duwan sida qalabka caadiga ah, Xogta Kaydinta Macluumaadka ayaa kuu sheegi doonta marka xogta la xayiray. Waxaad ubaahan tahay inaad hagaajiso goobaheeda oo aad bilawdo ogeysiisyada saxda ah ee sanduuqaaga. Waxa kale oo aad u wargalin kartaa moobilkaaga adoo isticmaalaya fursadaha gaarka ah. Sidaa darteed, Kaydinta Macluumaadka waa barnaamijka dhammeystiran oo ujeedkiisu yahay sameynta habka wax loo soo saaro si aad u habboon oo sahlan. Waxa ugu fiicani waa in ay ka timaaddo kharashka Source .